PMP V / s PRINCE2:Kutanga kuenda kune kubudirira kunogona kunge kusarudza kudana asi mutsara unotevera unofanirwa kusarudza pakati pezvidzidzo zvakasiyana siyana zvekudzidza nekusimbiswa kunatsiridza hutano hunodiwa kuti huve hwakakosha zvakagadzirirwa basa.
MuZimbabwe Investment, zvibvumirano zviviri zvakakosha zvinotsigira rutsigiro rukuru nevanyori vekunyora ndivo PRINCE2 - chirevo cheMabasa PAKUTONGWA MUMWE uye PMP-inogara iripo ye Venture Administration Proficient. Sezvo nyanzvi itsva inokura, munhu wese anosarudza sei kubvumirwa kuchapa simba rinodikanwa pamusoro pevadzivisi uye achapa simba rekufambisa mumhepo ine simba ye Venture Administration Field?
PMP V / s PRINCE2: Chii chinoreva kusangana nemashoko?
PMP isimbiso. (PMP inotarisa paNzira).
Chero mamiriro ezvinhu, PMP haisi yega tsika yemutambo inogona kuitika. Icho chibvumirano, kunyange zvakadaro kupfuura iyo iyo purogiramu inokwanisa, iyo yakatanga kutanga USA. Icho chimiro chemasangano akawanda anonyanya kufungidzira aine tsvimbo yekuyerera kuti aenzanise sarudzo inoshandiswa mumunda wekushandura hutungamiri, uye inosanganisira uzivi hwakaiswa mumigwagwa pamabhizimisi akasiyana-siyana, kudzidza uye kutevedza nzira uye mafungiro ekufunga zvakakosha kuti apedze Future Vent Chief.
Vaya vari kupinda mubhizinesi vachawana kuti inosimbisa uye yakazara izwi rinotaura nezvemashoko achavabatsira kuti vanzwisise nzira dzekutungamira hurumende huri nani. Iyo pasina mubvunzo inovimbisa mari yepamusoro yekubhadhara uye avo vanotarisira kuita basa muNorth America seBusiness Improvement Director vane chokwadi chekubatisa zvigaro zvepamberi munharaunda yapamberi. Inopa masangano anotyisa ekushandurwa kwemashoko, kubatsira vateereri kusvika nechishamiso chekutanga chekuita iyo inoita kuti CV ive yakasimba chaizvo pamusoro penguva refu.
Zvadaro zvakare, PRINCE2 - inofungidzirwa mu UK (Focus on on Why) - is Venture Administration system pachayo, iyo ine mitemo chaiyo pamusoro pekugadzirisa uye kuita shanduko, kupedzisa nemagadzirirwe akajeka ekugadzirisa, maitiro uye pfungwa dzingashandiswa mukati mekuita . Uyewo chikamu uye zvinosungirwa kune vashandi vose kuedza. Zvinhu zvaro zvinosanganisira kugadzirisa kuronga kwezviito maererano nekugadzirisa zvirongwa, kuronga zvirongwa uye kuronga boka.
Vanhu avo vanove vakaita sezvino vanoziva huzivi iyi ndeyekufunga kuti iyo yose inotaurirana uye inogadzirisa zvakanyanya, nguva dzose inogutsa zvinyorwa zviviri. Sezvo iri chirevo chakasimba kwazvo, chinonyanya kugadzirira mudzidzi nekusingaperi, kumuratidza unyanzvi hunodiwa kuronga hutano pane humwe humwe hunobudirira, uye humubatsira kuvandudza semugodhi uyewo mubhadharo wakazara waanoswededza paanowana hurumende inobatsira nzvimbo. Nekunyoreswa kwayo, vatengi vanobva kune imwe nyika vanogona kunzwisisa nekuita zvirongwa mumabasa avo chaiwo, vachiita kuti nzira yacho ive yakakura zvikuru mubhizinesi rimwe nerimwe.
Zvichienderana nekuti nyanzvi inoda sei kuunganidza kunzwisisa, kwaanofanira kuzviona iye pachake uye mune imwe purogiramu yaanoda kushanda nayo, uye iyo yaakagadzirirwa geogi anokwanisa kusarudza pakati pezviviri.